Shina Solar LED Street Light mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Ny hazavana Solar Street Street dia mampiasa ny masoandro ho loharano angovo ary ampiasaina amin'ny fametrahana amin'ny alina mandritra ny andro. Tsy mila fametrahana fantsona sarotra sy lafo, ary afaka manitsy ny fametrahana ny jiro amin'ny fomba tsy miangatra, azo antoka, fitahirizana angovo sy tsy fandotoana, tsy misy fiasana manual ary azo antoka sy azo antoka, mitahiry herinaratra sy tsy misy fikojakojana. Ny rafitry ny rafitra dia misy ampahany ampahany amin'ny sela finday (anisan'izany ny bracket), lohan-jiro LED, boaty fanaraha-maso (miaraka amin'ny mpanara-maso, bateria iray) ary tsanganana jiro;
Ny hazavana solar LED Street dia ahitana ampahany amin'ny sela sela amin'ny masoandro (anisan'izany ny bracket), lohan-jiro LED, boaty fanaraha-maso (miaraka amin'ny mpanara-maso, bateria iray) ary tsanganana jiro; ny tontolon'ny solar dia manana fahombiazan'ny mazava amin'ny alàlan'ny 127 Wp / m2, ary ny fahombiazana dia avo, ary ny rafitra dia avo. Manatsara ny endriny vita amin'ny rivotra; ny loharano jiro LED dia mampiasa LED manana hazavana avo lenta tokana (30W-100W) ho loharanom-pahazavana, ary mampiasa sampana tokana manam-pahaizana tokana iraisan-tsarimihetsika tokana, mampiasa ny marika manintona avo lenta.
Ny vatan-boaty fanaraha-maso dia vita amin'ny vy matevina, izay tsara tarehy sy mateza. Ny bateria plastika mitarika asidra-maimaim-poana sy ny famerenam-bidy ary ny mpanondrana fandroana dia napetraka ao anaty boaty fifehezana. Ity rafitra ity dia mampiasa batterie-humifehy bateria mitarika asidra-acid. Satria kely dia kely ny fikojakojana azy, antsoina koa hoe â € œmaintenance-free bateriaâ, izay mifanaraka amin’ny fampihenana ny vidim-pamokarana ny rafitra. Ny fanaraha-maso sy famoahana enti-miasa dia namboarina miaraka amin'ireo fiasa roa ao an-tsaina (miaraka amin'ny jiro) Fanaraha-maso, ny fifehezana ny fotoana, ny fiarovana ny be loatra, ny fiarovana ny fandefasana ary ny fiarovana ny fifandraisana fifandraisana, sns.) Ary ny fanaraha-maso ny vidiny, ny fanatanterahana ny vidiny lafo.
Buy Solar LED Street Light nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Solar LED Street Light ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Solar LED Street Light Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.